RECICLOS: ity no fampiharana manova ny fomba fanodinana amin'ny loka | Vaovao Gadget
RECICLOS: ity no fampiharana manova ny fomba fanodinana amin'ny loka
Emilio Garcia | 14/06/2022 08:00 | fampiharana
Iray ihany ny planetantsika, ary tsy maintsy karakaraintsika izany mba hahasoa antsika sy ny taranaka ho avy. Izany no mahatonga ny tetikasa sy ny sehatra toy izany RECICLOS, manolo-tena amin'ny tontolo iainana sy ny fanodinana raha izany dia.
Amin'ny ankapobeny dia mifototra amin'ny rafitra SDR, izany hoe System Return and Reward, ka manome valisoa ho an'ny olom-pirenena manolo-tena amin'ny fanodinana sy fiainana maharitra kokoa. RECYCLES dia ahafahanao mahazo ireo valisoa ireo amin'ny hetsika tsotra, ary tena tsara, manodina kapoaka sy tavoahangy plastika. Mora izany.
1 RECICLOS sy ny rafitra SDR
2 Ahoana ny fiasan'ny SDR?
3 Teboka azo
4 Nahoana no misafidy RECYCLES?
RECICLOS sy ny rafitra SDR
Ecoembes no tao ambadik'ity rafitra SDR ity, izay a evolisiona amin'ny modely amin'ny fanodinana ankehitriny fa na dia efa maro aza ny olona manodina dia mbola misy ihany ny sasany misalasala manao izany.
Ny rafitra SDR koa dia zava-baovao, anisan'izany ny teknolojia fitaovana finday toy ny fototra. Ny famporisihana dia mety manomboka amin'ny fandraisan'anjaran'ireo ONG, hatramin'ny raffle ho an'ny bisikileta, scooter elektrika, tapakila fitateram-bahoaka, sns, izany hoe mifandray amin'ny fiarahamonina maharitra kokoa ny zava-drehetra.
Ny RECICLOS dia mikatsaka ny hananan’ny RECICLOS fahafahana vaovao hanompoana amin’ny alalan’ny fako ireo fako rehetra izay hiafara amin’ny fandotoana ka tsy ampiasaina. fanodinana sy fampiasana indray ny plastika sy ny metaly ao anatin'ireo kaontenera ireo.
Ary raha mahaliana anao ny RECICLOS dia lazao fa efa misy maromaro izy io kaominina an'ny CC.AA rehetra. ao amin'ny firenena, manova ny fahazaran'ny olom-pirenena ho amin'ny tontolo tsara kokoa, azonao atao ny manamarina raha tonga any amin'ny tanànanao ny RECICLOS amin'ny tranokalany ww.reciclos.com. Ary, raha miasa, dia mampiditra teknolojia ao amin'ny kaontenera mavo izy io mba ahafahan'ny olom-pirenena mametraka ny kapoakany sy ny tavoahangy plastika misy zava-pisotro ao ary amin'ny alàlan'ny fampiharana azo alaina ho an'ny iOS sy Android, dia azo alaina ireo famporisihana ireo.
Mametraka milina RECICLOS amin’ny toeran-kafa koa izy ireo, toy ny tobim-pitaterana, toeram-pivarotana sy fialamboly, sns, mba ahafahan’ny olom-pirenena manao izany. recycle koa rehefa mivoaka Avy any an-trano.
Ahoana ny fiasan'ny SDR?
RECICLOS dia miasa amin'ny fomba tena mora sy mahazo aina noho ny teknolojia vaovao. Ny zavatra voalohany dia ny télécharger ny fampiharana maimaim-poana RECYCLES amin'ny findainao:
Misintona fampiharana ho an'ny iOS/iPadOS
Misintona fampiharana ho an'ny Android
Raha ny amin'ny fampandehanana ny SDR, dia tena tsotra rehefa nametraka ny fampiharana amin'ny findainao, ary dingana 5 ihany no ilainao:
Sokafy ny fampiharana RECYCLES amin'ny findainao.
Andramo ny kaody bar amin'ny kapoaka na tavoahangy plastika miaraka amin'ny fampiharana RECYCLES.
Alefaso ao anaty kaontenera tianao hamerenana ny kaontenera, na mavo na milina RECICLOS.
Scan ny QR ny fitoeran-javatra na ny milina.
Mahazoa isa ary avoty ho fandrisihana maharitra na ara-tsosialy.
rehefa mandeha ianao manangona teboka, azonao ampiasaina amin'ny tanjona ara-tsosialy na maharitra, hikarakarana ny fiarahamonina sy/na ny tontolo iainana. Ary ny isa azo takalon’ny fanomezana ho an’ny ONG, tapakila fitateram-bahoaka, latsa-bato ho an’ny fiara mandeha tsy misy entona, fanatsarana ny manodidina, sns.
Nahoana no misafidy RECYCLES?
Iray amin'ireo antony hampiasana RECYCLES dia ny hoe tohanan'ny teknolojia vaovao izy io, mifanaraka amin'ny vanim-potoana vaovao ary mahatonga ny dingana manontolo ho mivantana sy mora kokoa. Ho an'ny tanjona ara-tsosialy sy maharitra izay tohana ihany koa, ary ny tombotsoa amin'ny famporisihana ny fanodinana ny kapoaka sy ny tavoahangy plastika.
Fa mbola misy, toa an'io ao ambadik'io SDR io misy a andrim-panjakana toy ny Ecoembes, izay azo itokisana sy efa niezaka hatry ny ela hiala amin’ny tontolo tsara kokoa sy hanova ny fomba fiainan’ny olona maro eto amintsika. Ary noforonin'ny The Circular Lab, ivon'ny fanavaozana misokatra amin'ity andrim-panjakana ity ary novolavolaina tamin'ny teknolojia Espaniola 100%.
Etsy ankilany, izany koa dia mifanaraka amin'ny tanjona fanodinkodinana napetraky ny Vondrona Eoropeana, izay mihamitombo hatrany ary mila fanoloran-tena fanampiny avy amin'ny tsirairay mba hanatanterahana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » RECICLOS: ity no fampiharana manova ny fomba fanodinana amin'ny loka
Ny Oukitel WP19 vaovao dia tonga amin'ny hazavana, fomba hafa mahatohitra
Evil Dead: The Game, fofonain'ny rivotra madio ho an'ny karazana [Analysis]